Yuusuf Garaad makala hadley dowladda Norway heshiiska dib u celinta Soomaalida? - Africa News Addict
Yuusuf Garaad makala hadley dowladda Norway heshiiska dib u celinta Soomaalida?
Eastern Africa 18-6-2017 horseedmedia.net 46
Wasiirka arrimaha dibada iyo xiriirka caalamiga ah ee dowlada federaalka ah ee Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar ayaa isbuucii lasoo dhaafay booqasho rasmi ah ku joogay dalkan Norway. Isaga oo kulan la qaatay wasiirka arimaha dibada dalkan Norway, Børge Brende. Ilaa hada ma cada qodobada ay wasiiradu kaga wada hadleen kulankaas, iyo waxa ay isla meel […]
The post Yuusuf Garaad makala hadley dowladda Norway heshiiska dib u celinta Soomaalida? appeared first on Horseed Media • Somali News • Politics & Opinion.